Wasiirka cadaaladda iyo taliyaha booliska oo baarlamaanku u yeerey - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
La daabacay torsdag 21 september 2017 kl 09.59
Taliyaha booliiska Dan Eliasson ( midig) iyo wasiirka caddaaladda Morgan Johansson ( dhexda). Foto : Jessica Gow/TT
Guddi hoosaadka baarlamaanka ee dhanka caddaaladda ayaa labadaan mas’uul wuxuu su’aalo ka weydiin doonaa fadeexaddii dhanka IT-ga ee booliiska dalkaan ka dhacdey.
Mas’uuliyiintaan u yeeritaankooda waxaa gundhig u ah ka dib markii idaacadda Sweden ay kashiftey amaan la’aan la xiriirta maamulka ciidamada booliiska taas oo raad la leh habka mushaarada ciidamada loo bixiyo iyo diiwaangalintooda intaba.
Idaacadda Iswiidhan ayaa laba usbuuc ka hor kashiftey in taliyaha ciidamada booliisku Dan Eliasson uu sanadkii 2015-kii go’aamiyey isagoo baalmaraya xeyndaabka amni ee maamulka ciidamada, in si gaar ah habka mushaarka ciidamada loo bixiyo loogu ogolaado shirkad gaar loo leeyahay.
Ciidamada booliiska ayaa markey u caddaatey in dhibi ka heysato habka loo maareeyo mushaarada ciidamada, waxay caawimaad ka dalbadeen shirkad dalka Kanada laga leeyahay oo magaceeda loo soo gaabiyo CGI, taas oo iyadu leh ”Palasso” oo ah hab loo isticmaalo mushaar bixinta shaqaalaha.
Shirkadda CGI ayaa ugu danbeyntii sirtii mushaar bixinta ciidamada loo gacant galiyey taas oo xafiisyadeeda u qaadatey.